Haayada Caafimaadka Aduunka Oo Shaacisay In Maydku Aanu Sii Gudbinayn Coronavirus" - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Haayada Caafimaadka Aduunka Oo Shaacisay In Maydku Aanu Sii Gudbinayn Coronavirus”
April 20, 2020 11:05 AM - Written by Warbaahinta AlloolNews BO
Iyada oo ay jiraan cabsi iyo welwel ku saabsan in si toos ah loola falgalo Meydadka dadka u dhinta xannuunka Coronavirus (COVID19) ayay hay’adda Caafimaadka adduunku waxa ay shaacisay buug yar ama gacan-qabsi kajawaabaya dhammaan Su’aalaha la xiriira in Meydadka sababsaday Coronavirus ay dadka nool u gubin karaan Fayraska.
WHO Waxa ay xaqiijisay in illaa hadda macluumaadka iyo xogaha la helay ay muujinayaan in aan Meydadka dadka u dhinta Coronavirus aysan gudbin karin Fayraska, sidaas oo kalana aan weli la arag wax muujinaya in Fayraska ay qaadeen dadkii la falgalay ama aasay Meydadka dadka uu geeridooda sababay Fayrasku, si gaar ah iyada oo la maray hannaanka kahortagga ee ay waajibka tahay in ay qaadaan dhammaan dadka sida tooska ah u la falgelaya Bukaanada qaba Coronavirus.
Ma tahay maangal in la gubo Meydadka u geeriyooda COVID19?
Fahamka faafiyey hayeeshee aan xaqiiqada ku dhisnayn waa in ay suuragal tahay in dab la qabadsiiyo Meydadka dadka u geeiyooda Fayraska Corona, balse arrintaasi ma aha sax, haddii dadka qaarki sameeyeyna waa arrin la xiriirta Caqiido iyo Caado gaar ah hayeeshee habayaraatee wax xiriir ah lama laha xeeraka Caafimaadka ee Aaska ama duugta.
Arrinta muhiimka ah waa in muhiimadda la siiyo bedqabka Qof walba oo qabanaya howsha diyaarinta iyo Aaska Meydadka dadka u geeriyooda xannuunkan, waxaa waajib ah in dadka qabanaya howshaas Asturka Meydadku ay si hagaagsan u nadiifiyaan gacmahooda ay qaadaan dhammaan tillaabooyinka muhiimka u ah kahortagga Fayraska sida ay haystaan qalabka illaalinta Bedqabka Shaqsiga ah.
Sidee Kooxda Aasku isaga illaalinayaan in Fayrasku u gudbo?
Tan koowaad waa in gacmaha la dhaqo si adagna loo nadiifiyo kahor iyo kaddib inta aan la taaban Meydka iyo dhammaan walxaha ku gadaaman iyada oo qof walba oo kaqaybqaadanaya Aasku uu xiran yahay qalabka illaalinta Bedqabka Shaqsiga ah, sida Lebiska Caafimaadka iyo Gacma-gashiga.
Haddii ay jiraan walxo ka soo baxaya Meydka sida Urka iyo dareerayaasha waxaa waajib ah in dadka howsha qabanaya ay illaaliyaan Wejiyadooda iyaga oo adeegsanaya Weji-gashi iyo Indho-gashi ama Ookiyaalaha Bedqabka.